Isku aadka wareega 8-da Champions League oo la sameeyay, PSG Vs Barcelona iyo Juventus Vs Monaco | Dhacdo.com
Home Ciyaaraha Isku aadka wareega 8-da Champions League oo la sameeyay, PSG Vs Barcelona iyo...
Isku aadka wareega 8-da Champions League oo la sameeyay, PSG Vs Barcelona iyo Juventus Vs Monaco
Isku aadka wareega 8da Champions League ayaa goordhaweyd la soo saaray, waxaana ka soo baxay kulamo xiiso leh iyadoo taasi ay xaqiijisay in xilli ciyaareedkii 8aad oo isku xigta in ugu yaraan hal koox oo Isbaanish ah ay gaareyso semi-finalka.
Waxaana taasi ugu wacan in kooxda koobkaan difaacaneysa ee Real Madrid ay isku soo aadeen kooxda deriskeeda ah ee Atletico Madrid, iyagoo xilli ciyaareedkan in badan iska horyimid. Isla Spain kooxda Barcelona ayaa wareega 8da waxa ay ku wajaheysaa kooxdii ay isku soo arkeen wareega group-yada ee Paris Saint Germain.
Dhanka kooxda Bayern Munich oo ka mid ah kooxaha ugu cadcad tartankaan ayaa waxa ay qoorta isgelin doonaan kooxda reer Portugal ee FC Porto, halka Juventus ay wajihi doonto kooxda Faransiiska ee AS Monaco.
Lugta hore ee wareega 8da Champions League waxaa la ciyaari doonaa 14ka iyo 15ka bisha April, halka lugta labaad la ciyaari doono 21ka iyo 22ka bisha April.
Isku aadka Wareega 8da: